DAAWO LA-YAABKA: Nin reer Burco ah oo saddex xaas oo uu qabay u guuriyeen xaaskii Afaraad - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Home Bulshada DAAWO LA-YAABKA: Nin reer Burco ah oo saddex xaas oo uu qabay...
Nin ka soo jeeda magaalada Burco ee Gobolka Togdheer ayaa arrin la yaab leh sameeyay, kadib markii saddex haween ah oo uu qabay ay u guuriyeen xaaskiisii afaraad.
Ninkan oo lagu magacaabo Eng. Bashiir ayaa sheegay in arooska iyo xaaska afraad ay soo qabanqabiyeen saddexda xaas ee uu hore u qabay.
Video sare ka daawo ninka arrintan sameeyay oo ka hadlaya.
Nin saddex haween
Previous articleXOG: Shariif Xasan oo Dagaal siyaasadeedkii ugu weynaa ku bilaabay Musharax Xasan Sheekh & Beeshiisa
Next articleDonald Trump oo wiil gabadhiisa qaba u magacaabay la-talihiisa Aqalka Cad ee Mareykanka